विवाहेत्तर सम्बन्धले बनायो ईश्वरीलाई आमाको हत्यारा
१६ असार, काठमाडौं । जीवन साथीको अनुपस्थितिमा जैविक आवश्यकताले जन्माएको बाध्यता वा जीवन साथीसँगको असन्तुष्टि ? या, नयाँ यौन पार्टनरको खोजी ? यस्तै बाहानामा मानिसहरु विवाहेत्तर सम्वन्धमा रमाउन पुग्छन् । तर नेपाली समाजमा यस्तो सम्बन्धलाई अवैधानिक र अनैतिक मानिन्छ ।
अनि, त्यही अवैधानिक र अनैतिक सम्बन्ध लुकाउने नाममा मानिसहरु अपराध कर्मतिर लाग्छन् ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७, बाँसबारीकी ईश्वरी भट्टराईलाई पनि यही विवाहेत्तर सम्बन्धले ‘हत्यारा’ बनाएको छ, त्यो पनि आफूलाई जन्म दिने आमाको ।
ईश्वरी गार्मेट कारखानामा काम पनि गरिन् । त्यही क्रममा सिरहाका मोहमद नौसादसँग नजिकिइन् । उनीहरुको सम्बन्ध यति घनिष्ठ भयो कि गार्मेन्टको काम छोडेपछि पनि नौसाद बाँसबारीस्थित ईश्वरीको घरसम्मै आउन थाले ।
सोनामा एयरपोर्ट अगाडि होटल गर्थे, त्यसले पनि नौसादलाई ईश्वरीको घरसम्म आउन सहज भयो होला ।
ईश्वरीकी आमा साबित्री थापा छोरीज्वाइँ कहाँ आइरहन्थिन् । त्यही क्रममा उनले छोरीको विवाहेत्तर सम्बन्धबारे थाहा पाइन् । छोरीको घरबार भाँडिने देखेपछि उनले ज्वाइँ सोनाम थापा मगरलाई सबै कुरा भनिदिने भन्दै सचेत गराइन् । आफ्नी छोरीलाई छाड्न र विदेश जान भन्दै सावित्रीले नौसादलाई १ लाख रुपैयाँ पनि दिइन् । नौसाद ९ जेठमा यूएई पनि पुगेका थिए तर, अर्कै योजना बन्यो ।
विदेशमा हत्या योजना
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाकाअनुसार यूएई पुगे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई जनाबीच कुराकानी हुनथाल्यो । उनीहरु विवाह गर्न चाहन्थे तर, त्यसका लागि आमा तगारो बनेको माने ।
‘आमा रहुञ्जेल विवाह हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेर दुई जनाले हत्याको योजना बनाएको देखिन्छ’, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
नौसाद एक्लैले हत्या गर्न नसक्ने बताएपछि भारतबाट दुई जना कन्ट्राक्ट किलर प्रयोग गर्ने उपाय निकाले । नौसाद १० असारमा सुटुक्क यूएईबाट फर्किए । कन्ट्राक्ट किलर खोज्न १२ गते भारततिर लागे । अर्जुनकुमार भनिने भोलाकुमार र मोहम्मद रसिदलाई लिएर १४ गते नेपाल आए ।
त्यतिन्जेल ईश्वरीले सीम कार्डको जोहो गरिसकेकी थिइन् । ‘दिदीको नागरिकताबाट सीम कार्ड निकालेर पहिल्यै दिएकी रहिछिन्’, साबित्री हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘नेपाल आएपछि आमाको हत्या नहुञ्जेल भेटघाट र कुराकानी पनि नगर्ने योजना रहेछ ।’
हत्यामा तीन जनाको संलग्नता
ईश्वरीकै संलग्नतामा सावित्रीको हत्या गर्ने योजना बनेकाले उनीहरुलाई सूचनाको कुनै अभाव भएन ।घटना घटाउने दिन ईश्वरी घरमा नबस्ने योजना भएकाले उनी आइतबार विहानै दिदीकहाँ जान्छु भन्दै हिँडिन् । सोनाम पनि होटलतिर लागे । त्यही मौकामा तीन जना घरमा पुगेको प्रहरी अनुसन्धानले खाएको छ । सावित्राले नौसादलाई चिनिन् , तँ किन आएको भन्दै गराइन् । यो सुनेकी छिमेकी पूजा राईले के भयो आमा भनेर सोधेकी पनि थिइन् । तर उनीहले ‘केही होइन, आफन्त नै हो’ भने ।
जेठ २ गतेमात्र यो परिवार त्यहाँ आएको थियो । त्यसैले आफन्त भनेपछि पूजा आफ्नो कामतिर लागे । केहीबेर छिमेकी फेरि सावित्रीको घरमा गइन्, उनी किचनमा काम गरिरहेकी थिइन् भने बच्चा भुइँमा थिए ।पूजाले बच्चा स्कुल लैजान ढिला भयो भनेपछि सावित्री नातीलालाई ठीक पार्न लागिन् । उनी पनि आफ्नो काममा लागिन् । तर केही घन्टामा त सावित्रीको हत्या भएको खबर सुनेको छिमेकी पूजाले बताइन् ।आफूले मुख थुनेको अर्जुनले हात समाएको र रहिशले घाँटी रेटेको हत्या गरेको बयान नौसादले दिएका छन् । घटनाको प्रयोग भएको चक्कु अर्जुन र रहिशले नै चक्कु ल्याएका थिए ।
प्रहरीकाअनुसार नैसाद पक्राउ पर्जुअघिसम्म ईश्वरीले आमाको हत्या भएको भन्दै बिलौना मात्र गरेकी थिइनन्, हत्यारा पक्राउ गर्न माग गर्दै आएकी थिइन् । तर नौसाद पक्राउ परेपछि उनले आफ्नो अपराधकर्म स्वीकार गरेका छन् ।
हत्यापछि रकम दिने समझदारी
अनुसन्धानअधिकृतका अनुसार कन्ट्राक्ट किलरले नौसादसँग मोटो रकम माग गरेका थिए । तर, ईश्वरीले त्यसको चिन्ता नगर्न भनेको नौसादले बताएका छन् । ‘काम फत्ते भएपछि पैसा दिने कुरा भएको थियो’, उनले प्रहरीसँग भनेका छन् ।
Tags: विवाहेत्तर सम्बन्धले बनायो ईश्वरीलाई आमाको हत्यारा
Previous हावाहुरीको २५ दिन पूरा: कैलालीमा कृषिमा भएको क्षतीको विवरण संकलन भएन
Next भोजपुर भिडन्त : विप्लव समूहले प्रहरी जवानलाई ‘लखेटेर’ गोली हानेको थियो